Hiiraan: Ciidamada Doowlada & kuwa Jabuuti oo Qaad ku dagaalamay
Home Somali News Hiiraan: Ciidamada Doowlada & kuwa Jabuuti oo Qaad ku dagaalamay
Mid kamid ah ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa shalay lagu dilay magaalada Buuloburte ee Gobolka Hiiraan, kadib dagaal dhex maray ciidamo katirsan kuwa Doowlada iyo kuwa Jabuuti.
Isku dhaca labada ciidan ayaa yimid kadib markii uu Askari Jabuutiyaan ah dharbaaxay Haweeneey Qaad ibineysay.
Ciidamada Doowlada Soomaaliya oo ka ag dhawaa Goobta ayaa ceersaday askari dharbaaxay Haweeneeyda balse waxa uu bilaabay inuu rasaas ku rido, waxaana markaas kadib uu dagaal dhex maray labada ciidan, taasoo sababtay inuu geeriyoodo mid kamid ah ciidamada Jabuuti.
Dhacdadaan ayaa noqoneysa tii 2aad oo ay labada ciidan isku dagaalaan arrimo Qaad
Imaaraatka oo xiray isbitaalkoodii Magaalada Muqdisho [Sabab]
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa xirtay xarun caafimaad oo ay ku lahaayeen...
Madaxweyne Farmaajo muxuu ka qabanaya Gaashaandhigga ? [Sawirro]
Jubbaland oo wada qorshe lagu sifeynaayo biyaha Wabiga